Dowlada Uganda oo Ciidan Badala kuwa kaga go’doonsan Muqdisho iyo kuwa ku halaagsamay u soo direysa Muqdisho. | Halganka Online
War Deg Deg ah: Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo Jihooyin kala gedisan kasoo galay magaalada Dhoobleey iyo Gaadiid ay ka carareen Maleeshiyadii Axmed Madoobe oo laga heley Howdka Dhoobleey. Beenaale Daahir Calasaw (waagacusub.com) oo daadku qaadey kadib markii uu daan daansaday warbaahinta xortaa ee xaqiiqada tatbisa. SomaliMeMo oo heshay shax Milateri oo ay dejisay AMISOM si ay ugu qabsato magaalada Muqdisho iyo ciidamo taabacsan DKMG-ka oo si qarsoodi ah ku jooga deegaanada ay Mujaahidiintu ka maamulaan magaalada Muqdisho.(Warbixin dheer oo Xasaasi ah).	Nala Xiriir	Walaalkeen Sheikh Mohamed Umal weydiiya wadaad diintii laga bililiqaystay ?? Sh C/Qaadir Mu’min oo xalay Muxaadaro aad u qiimo badan oo ciwaankeedu ahaa (QALADAAD KU JIRA CAQIIDADA) ka soo jeediyey Masjidka Arraxmah ee ku yaala Magaalada Birmingham UK. Beesha deegaanka Iidaale Gobalka Bay oo Hubkii ugu tirada badnaa ku wareejisay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Xoogaga deegaanka Galgalo oo gaadiid dagaal ku qabsaday dagaalkii maanta iyo Laag iyo Karin oo lala wareegay. Calamada Ilmoland – England, Scotland, Finland, Iceland,Switzerland, Somaliland, & Puntland – oo kan Puntland ugu Foolxun Yahay!. Sarkaal katirsan Xisbul Islaam oo Cod qarsoodi ah laga qabtay isagoo ku faraxsan qabsashadaii Dhoobleey dhiiri gelina u samaynaya Maleeshiyada Axmed Madoobe iyo ONLF.(dhagayso) Dowlada Uganda oo Ciidan Badala kuwa kaga go’doonsan Muqdisho iyo kuwa ku halaagsamay u soo direysa Muqdisho.
Posted on March 24, 2010 by halganka	Felix Kulayigye oo ah Afhayeen u hadlay Wasaarada gaashan dhiga dowlada kirishtanka ah ee Uganda ayaa waxa uu sheegay in 1000 Askari oo ciidankooda ka mid ah ay ku daad gureynayaan gudaha wadanka Somaliya kuwaasi oo badali doona ciidanka dowladaasi kaga halaagsamay dagalka muqdisho ka socda ee ay isku hayaan iyaga iyo mujaahidinta ka dagalanta dhulka Somaliya.
Gaalkan kirishtanka ah oo la hadlayey wargeys lagu magacabo Daily Monitor oo ka soo baxa wadanka Uganda ayaa waxa uu sheegay in ciidan gaaraya 1000 askari oo badalay Askarta hadda kaga sugan magalada mudisho sida uu sheegay ay tagayaan somaliya bisha soo socota waxaana uu sheegay in ay jiraan qaar ka mid ah Askartooda ku sugan somaliya oo qaarkooda la soo badalayo si uga nastaan xabada mujaahidinta oo qaarkood ay la waasheen.
Arintan ayaa waxaa ay muujineysaa jabka xukuumada Saliibiga ah ee Uganda ka soo gaaray dagaalka ka socda muqdisho ee u dhexeeya mujaahidinta somaliya iyo ciidanka gaalada AMISOM isku sheegay ee ku sugan magalada muqdisho.
Ciidanka gaalada ah ee xooga ku jooga magalada muqdisho ayaa waxaa ay yihiin kuwo aanan inta badan ka soo bixin xarumo kooban oo ay ku leeyihiin magalada muqdisho islamarkana halkasi shacabka ka gumaada waxaase la sheegaa in tan iyo markii ay cagaha soo dhigeen somaliya ay ka baqtisay askar boqolaal gaaraya kuwasi oo uu Allah ku halaagay gacmaha shacabka iyo mujaahidinta dalka Somaliya ku sugan.
Filed under: Uncategorized « Sheekh Cali Jabal “Qabri kasta oo alle sokokadiis la caabudo waan Burburi doonaa ilaa Muqdisho ka noqoto meel ka maran Shirkiga Shabaabul Mujaahidiin oo Maanta Dhulka lasimay Qabriyadii ay ku aasnaayeen Sheykh Aadan Dheere iyo Cali Muumin . »